Nsogbu na ihuenyo zuru oke na Chrome? Lee azịza ya | Site na Linux
Nsogbu na ihuenyo zuru oke na Chrome? Lee azịza ya
Ikechukwu1989 | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Nke mbu na nke a bu mbido m n’iru nnukwu Obodo a. Na post a, ị ga - ahụ obere azịza ga - arụ ọrụ karịa otu onye n’ọdịnihu, ma ọ bụ mgbe ha nwere ụdị nsogbu a.
Aga m ekwu okwu banyere ikpe m: Na-agagharị na blọọgụ Ndokwa Achọtara m ọkwa nke nyocha nke atụmatụ ọhụrụ ndị enyi m nyere Kingsoft WPS .lọ Ọrụ, ọ bụkwa ngwaahịa mgbanwe Ọchịchị Kingsoft nke na-enye ọtụtụ ihe ikwu maka obodo ndị agbasoro Free Software.
Ọfọn ruo n'ókè na post ahụ, ekpebiri m ịnwale ihe ọhụụ ọhụrụ a Kingsoft, Ebudatara m ngwanrọ ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ọ na-egosi na anaghị m agba ọsọ n'ihi na ọ bụ nsụgharị maka x32 ma erubeghị maka x64.
Ekwesịrị m ịwụnye ụlọ akwụkwọ i386 site na iji iwu na-esote site na njikwa:
Ihe niile zuru oke, enwere m ike ime ihe m chọrọ mana mgbe ịmalitegharị ọ na - apụta na esemokwu na Google Chrome m nwere: Enweghi ike ịpụ na ihuenyo zuru oke. Achọrọ m ma googled a otutu ma ahụghị m ọtụtụ azịza.
Mgbe awa abụọ nke nyocha na nyocha gasịrị, emeghere m njikwa faili ahụ wee chọọ ụzọ ebe Google Chrome na-echekwa mmasị ndị ọrụ nke echekwara na ~ / .config /. Site na njikwa m mere ihe ndị a:
Ihe iwu a na-eme bụ ịkwaga folda mmasị site na google-chrome na google-chrome.old. Nke a doziri nsogbu m ihuenyo zuru oke.
Iji weghachite ibe edokọbara gị, okwuntughe na ntọala gị site na Google Chrome, banye ọzọ wee megharịa data gị.
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ Google gị jikọtara ya na Chrome mgbe ahụ ị ghae idetuo folda ~ / .config / google-chrome.old / Ndabere na ~ / .config / google-chrome / Default.
Nke ahụ bụ ya, enwere m olileanya na ntuziaka a ga-enyere gị aka mgbe ịchọtara onwe gị n'ụdị ọnọdụ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Nsogbu na ihuenyo zuru oke na Chrome? Lee azịza ya
Dịka okwu m nwere ike ịgwa gị na dịka ahụmịhe m ihe ị mere na-arụkwa ọrụ maka mmemme ndị ọzọ kpatarala ihe ụfọdụ. Ọ ga-abụ ihe dị ka ịmalitegharịrị usoro ihe omume na ntọala ndabara.
Ọtụtụ oge ahụrụ m mkpa ihichapụ folda nhazi nke mmemme. Nọmalị ha nwere ike ịchọta n'ụlọ anyị zoro ezo:
.chekwa / ike / program_name
na n'otu ụlọ nwere «aha mmemme». M dokwuo anya na ị ga-ehichapụ naanị folda na-ebu aha nke mmemme ndị na-enye anyị nsogbu na ha nwere ike ime ya site na onye njikwa faịlụ anyị dịka onye ọrụ nkịtị. Ma ọ bụ site na njikwa dị ka ị na-ekwu, ọ dị mma mgbe niile ịkwado ka ị na-ekele hehehe.
Ọ dị mma ịmara ọnụ, agbanyeghị na anaghị m eji hehe.
Nke mbụ, ọ dị ezigbo mma, eziokwu bụ na ọ na-ejere m ozi na pc enyi m nwanyị, mana m wụnye ubuntu 13.10 n'oge na-adịbeghị anya maka ule na ọ tụgharịrị na ngwugwu ia32-libs na 13.10 adịghịzi adị, na-emetụta ọtụtụ mmemme dịka skype, mmanya , crossover, ụfọdụ mmemme ọdịyo na vidiyo, nwere olile anya na ị nwere ike idozi ya iji wụnye Kingsoft Office na ubuntu 13.10, Ekele
nsogbu na chrome? gbalịa ngwọta a ọ rụrụ ọrụ zuru oke maka m.
# apt-nweta mmelite
# apt-nweta wepụ –purge chrome
# apt-nweta wụnye Firefox
O di nwute na obughi anyi nile nwere otu uto maka firefox, ihe m choro na Chrome bu na ibe m nile ka m tinye, okwuntughe na ihe omuma web ya na Google ka anyi na Firefox amaghi m ma oburu na enwere uzo iji dozie data 😛
Ọ dị m ka Firefox nwere ụdị nhọrọ ahụ, nke m na-ejide oge ụfọdụ ma ọ rụghịrị m ọrụ hehehe. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere m jiri Chrome ma ọ bụ Chromium, ejiri m mekọrịta ma nwee ike ịnweta site na desktọọpụ m, mbadamba nkume ma ọ bụ site na kọmpụta ọzọ ma ọ bụ distro nke m tinyere na kọmputa m. Banye ma ọ bụ ya. 🙂
Kpọmkwem, nke ahụ bụ ihe m masịrị na Chrome na-aga, dị mfe iji na pc ọ bụla, laptọọpụ, mbadamba ọbụnadị ekwentị m, ị na-eji ozi Google gị na voila abanye, ị nwere ibe edokọbara na mmasị gị niile.
Dogharia ebe eOS